IT News APK Download - Free Books & Reference APP for Android | APKPure.com
Home » Books & Reference » IT News
IT News APK
Using APKPure App to upgrade IT News, fast, free and save your internet data.
The description of IT News
ဒီ Application မှာဆိုရငျ Programming Language တှနေဲ့ပတျသကျပွီးလလေ့ာဖတျသားလို့ရပါတယျ။
Online တှေ Facebook တှမှော တကူးတကရှာစရာမလိုပဲ ဒီ Apps လေးရှိရုံနဲ့ အလှယျတကူ ဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
မိတျဆှဖေတျလို့ နှဈသကျတဲ့ Article တှကေိုလဲ Book Mark မှတျထားနိုငျပါတယျ။ မိတျဆှအေနနေဲ့ Apps ကနဖေတျရှုဖို့အဆငျမပွတေဲ့အခြိနျမြိုးဆိုရငျ Email Subscribe လုပျပွီး အခြိနျနှငျ့တပွေးညီ Article ကို E-Mail ကနတေဈဆငျ့ရယူနိုငျပါတယျ။
Online ရော Offline ရောသုံးလို့ရတာဖွဈတဲ့အတှကျ ပထမဆုံးတဈကွိမျတော့ အငျတာနကျ ဖှငျ့ပွီး ဝငျပေးထားရုံနဲ့ နောကျတဈခါ အငျတာနကျမဖှငျ့ပဲ ဝငျလို့ရမှာဖွဈပွီး။ မိတျဆှအေနနေဲ့ Update Article မြားရယူလိုတဲ့အခြိနျကမြှပဲ အငျတာနကျဖှငျ့ပွီး Update Article မြားကိုရယူနိုငျပါတယျ။
ဒီ App မှာဆို လကျရှိ စိတျဝငျစားစရာ Category ၁၅ ခုလောကျရှိပါတယျ။နောကျပိုငျး အလြှငျးသငျ့ရငျသငျ့သလို Category မြားထပျတိုးသှားမှာဖွဈပွီး စိတျဝငျစားစရာ Article မြားကိုလဲ မွနျမာလိုဖတျရှုရမှာဖွဈပါတယျ။
Article Resource တှအေနနေဲ့ကတော့
1. LoL - Security
2. C# and Programming languages for beginners
3. Programming Wiki- စှယျစုံ ပရိုဂရမျးမငျး
5. Jual Web development Training
စတဲ့ Page တှေ Site တှကေနေ ခှငျ့ပွုခကျြရပွီးမှ ဖျောပွပေးထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
ဒီ Application မှာဆိုရင် Programming Language တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာဖတ်သားလို့ရပါတယ်။
Online တွေ Facebook တွေမှာ တကူးတကရှာစရာမလိုပဲ ဒီ Apps လေးရှိရုံနဲ့ အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေဖတ်လို့ နှစ်သက်တဲ့ Article တွေကိုလဲ Book Mark မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ Apps ကနေဖတ်ရှုဖို့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင် Email Subscribe လုပ်ပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ Article ကို E-Mail ကနေတစ်ဆင့်ရယူနိုင်ပါတယ်။
Online ရော Offline ရောသုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပထမဆုံးတစ်ကြိမ်တော့ အင်တာနက် ဖွင့်ပြီး ဝင်ပေးထားရုံနဲ့ နောက်တစ်ခါ အင်တာနက်မဖွင့်ပဲ ဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပြီး။ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ Update Article များရယူလိုတဲ့အချိန်ကျမှပဲ အင်တာနက်ဖွင့်ပြီး Update Article များကိုရယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီ App မှာဆို လက်ရှိ စိတ်ဝင်စားစရာ Category ၁၅ ခုလောက်ရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်း အလျှင်းသင့်ရင်သင့်သလို Category များထပ်တိုးသွားမှာဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ Article များကိုလဲ မြန်မာလိုဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Article Resource တွေအနေနဲ့ကတော့
3. Programming Wiki- စွယ်စုံ ပရိုဂရမ်းမင်း
စတဲ့ Page တွေ Site တွေကနေ ခွင့်ပြုချက်ရပြီးမှ ဖော်ပြပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fix font error.
You can use Zawgyi Font or Unicode Font.
Fix Apps debug error for any phone.
Something design was changed.
You can quickly login without using Facebook Login.
IT News APK Version History
IT News 1.1 for Android 4.1+ APK Download
APK File SHA1: 8e073fdc6920f4957ca07ed1d93457e6bb1ec2d7
What's new: Fix font error. You can use Zawgyi Font or Unicode Font.Fix Apps debug More...
Myanmar Fb Guide - Fb ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ
U Zaw Converter
Pyay City Guide
UCS Taungoo Voting